Dawlada oo loogu baaqay inay jeelka u taxaabto siyaasi mashruuc ka dhigey cudurka Kooro - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada oo loogu baaqay inay jeelka u taxaabto siyaasi mashruuc ka dhigey cudurka Kooro
Waxa manta wasaarada caafimaadka soo sartey in qofkale laga helay hargabka Kooro taasina ka dhigeyso qofkii labaad ee dalka guud ahaan laga helo cudrka. Siyaasiga Mahad Salaad ayaa beeniyay inuu qof labaad laga helay.
”Waxaan la hadley qofka wasaaradu sheegtay in laga helay cudurka wuxuuna ii sheegay in aanu qabin cudurka, waxaanan qabaa inay sheekadan ay tahay mashruuc lacaga looga doonayo aduunka ayuu soo qorey.
Wuxuuna intaas raaciyay in qof sagaal cisho takoor ku jiraey wax calaamado ahna aanan muujin sida lo dhihi karo wuxuu qabaa cudurka ayado ayna jirin qalab lagu baaro. Waa mashruuc lacag lagu raadsanayo ayuu yiri.
Haddaba waxaad is weydiin kartaa ma isagaan wax ka qaadanaa mise dawlad dhisan oo meelo badan wax ka og mise wiilka ay isku jufada yihiin ee u telfoonka kula xiriirey sidii sheeganayo ayuu yiri Cali Calasow oo Muqdisho jooga.
Ururka caafinaadka aduunka wuxuu leeyahay qofku waa inu takoorid ku jiraa 7 casho haddii uu qabo calaamadaha hargabka caadiga ah haddii uu qufac iyo xumad leeyahayna uu takoor ku jiraa 14 cisho.
Mahad Salaad oo kala garan la wax siyaasad laga dayo iyo wax kale wuxuu leeyahay sagaal cuisho ayuu xanibnaa. Marka ma isagaa khabiira iyo dawlada meelo badan wax ku og.
Wuxuu yaraysanayaa kaalinta dawlada ee cudurka asagoo cusdurka dhanba ka dhigey wax aan jirin o mashruuca taas oo ka dhigan inuu halis gelinaayo ummada Somaliyeed ayuu raaciyay Cali Calasow.
Waxa kaliya ee aan oran lahaa in waajibkiisa la mariyo si ummada looga hor wareejo qof caafimaadkooda halis ku ah ayuu yiri Jimcaale Xasan oo la socda halista cudurkan.
Warbixintii C/llaahi Warmoge